Royal Icing (Maitiro Ekuwana Iyo Yakakodzera Kubatana) - Frosting Uye Icing
Royal icing ndeye iyo inopenya glaze iwe yaunoona pane akanaka makuki! Inogona kuve nemavara, pombi, mafashama uye nezvimwe zvakawanda!
Royal icing yakanyanyisa kuita basa tichifunga kuti inongogadzirwa kubva mazai machena, kirimu yetartar, shuga yeupfu uye dash yevanilla. Iwe unogona kuuputira pasi kuti uridze pombi, kupenya kana mafashama. Ndiri kuzokuratidza zvese zvaunoda kuti uzive nezvekugadzira icing yeumambo kuki.
Mashandisiro Aungaita Royal Icing
Chinhu chinovhiringidza vanhu vazhinji nezveumambo icing ndechekuti iwe zvichienderana nezvamunoda kuita, iwe uchafanirwa kugadzirisa yako yeumambo icing kuenderana (kuti rakakora kana kuonda sei). Ndinoziva kuti zvinonzwika sekunyengera asi hachisi chaizvo! Muvhidhiyo ino ndinokuratidza chaizvo zvauri kutsvaga kuti uzokwanisa kugadzirisa yako wega icing pamuedzo wako wekutanga.
Zvese zvaunoda kuti uite Royal icing makuki ndemamwe mbiya, zvipunu, mapipipi matipi, mapombi mabhegi, wemazino kana wemakuki munyori wekubvisa matema, mashupuni uye imwe mvura yekuonda.
Nei Royal Icing Iine Cream YeTartar?
Royal icing ine kirimu yetartar akawedzera kubatsira iyo recipe kuti ive yakasimba uye yakanaka uye chena. Hazvina basa zvachose asi iwe unenge uchifara nemhedzisiro yekupedzisira kana iwe ukaishandisa. Iwe unogona kuwana kirimu yetartari mune yekubheka nzira padura.
kutambudza keke zvinorevei
Yakakura Royal Icing
Ukobvu hweumambo icing ndeyekuti yako icing yeumambo inotarisisa sei iwe usati watanga kuisanganisa. SUPER akaomarara uye akanaka kwazvo asingashandisike chero chinhu kunze kwekubatanidza pamwechete imba yegingerbread kana imwe 3D makuki . Izvi ndizvo zvinowanikwa nevanhu vazhinji kana vachitevera nzira yeumambo icing uyezve ivo vasinganzwisise kuti nei isina kuonda uye kutsetseka. Ngatitaurei nezvazvo.
Mushure mekugadzira yako batch yeumambo icing, kazhinji iwe waizozoigovanisa zvinoenderana nezvaunenge uchiita. Pakati pese iwe unoshandisa nezve 1 mukombe panguva imwe (ini ndinongozvitarisa neziso). Iking icing inoenda kure kure.
Royal Icing Yekutsanangura
Iyi yeumambo icing yakanakira kugadzira ako marondedzero pamakuki ako. Iwe uchiri kuda kuti ive yakaoma asi isina kuomarara zvekuti haugone kuipusha nepabhegi repombi. Kutanga ne1 mukombe weakaomeswa emambo icing uye wobva wawedzera 1/2 tsp - 3/4 tsp yemvura (ona vhidhiyo) kusvikira iwe wasvika kuglobal kusagadzikana.
Royal Icing Glaze (Kumusoro Kuputira)
Kuti uwane jasi rakatsetseka remambo icing, iwe uchazoda kuwedzera 1 1/2 tsp - 2 tsp yemvura kune yako yakasviba yeumambo icing. Paunenge iwe wawedzera mvura shoma (teaspoon kana kudaro) ipapo yako yeumambo icing ichave YAKANAKA kutsetseka. Izvi zvinodaidzwa zvakare kuti 15 yechipiri icing nekuti kana iwe ukazvikanda pachayo, zvinotora masekondi gumi nemashanu kuti igare (ona vhidhiyo). Panguva ino unogona kukanda icing yako yeumambo pakuki, kuitsetsenura uye ndizvozvo. Ini ndinoda kusagadzikana uku kwakanyanya kukurumidza kupenya uye ini handinetseke zvakanyanya nezvekutsanangura. Uku ndiko kuenderana kwakakwana kwevatangi uye vana.
Royal Icing yeMafashama
Mafashama emambo icing anongoreva kuti icing yakati chechetere uye yakatetepa, unogona kufashamira nzvimbo neiyo yeumambo icing uye ichazvimisa pachezvayo. Kune izvi iwe unofanirwa kutsanangura kuki yako kutanga kuitira kuti iyo icing irege kudonha kuki. Kuti ugadzire icing yemafashama iwe uchawedzera nezve 2tsp-3tsp yemvura kune yako yakasviba yeumambo icing kusvikira iwe wawana marabhoni anova akapwanyika mushure memaminitsi gumi (ona vhidhiyo).
Ini ndinonyatsoda kushandisa mafashama icing ekugadzira muraraungu makuki, kuita iyo nyoro pane yakanyorovera maitiro kana kungo gadzira mafaro magadzirirwo. Kana iwe usina mabhegi ekupomba uye matipi iwe unogona chete kushandisa ziplock mabhegi nemakona akachekwa uye kukanda chinhu chose kana iwe wapedza kuitira nyore kuchenesa-up.
Iwe Unobvisa Sei Mabhonzo MuRoyal Icing?
Iwe unogona kuona mashoma mabhuru ari pamusoro peyako yeumambo icing. Izvi zvinogona kungouya kubva mukusanganisa maitiro kana pamwe iwe wakarova mweya wakawandisa muumambo hwako icing paunenge uchiwedzera mvura. Kana izvo zvichikunetsa, iwe unogona kushandisa yekumazino kana munyori wekuki kuti uvabvise. Ingo gadzira inokurumidza diki denderedzwa kufamba pamusoro pebhodhi kusvikira yapuka. Ita izvi chaipo mushure mekuisa icing pakuki neimwe nzira ichatanga kuseta ipapo ipapo mabhuru anonamira.
maitiro ekugadzira sitirobheki keke nyoro
Ndingaite Sei Kuti Ndigadzirise Zvikanganiso MuRoyal Icing Yangu?
Kana iwe uine nzvimbo pane yako kuki uko iyo icing isina kuenda, iwe unogona kushandisa wako wemazino kana kuki munyori kunyora zvinyoronyoro iyo yeumambo icing kune iwe kwaunoda kuti ive. Iwe unowanzoona zvakanakira kuita izvi mune iwo anonakidza timelapse mavhidhiyo. Royal icing inokanganwira zvikuru, iwe unongoda kuiisa munzvimbo yayo… chaiko.
Nei Ndichive Nemapundu Mune Yangu Yehumambo Icing?
Iwe unogona kunge uine mapundu kana macumpump mune yako icing kana iwe usina kuusefa kutanga. Kana iwe usina sifter, iwe uchafanirwa kushanda wakavakomberedza asi zvinogona kunyatso kukanganisa maitiro akatsetseka ako ekupedzisira kuki ari. Chimwe chinhu ndechekuti iwe unofanirwa kuchengetedza yako yeumambo icing yakafukidzwa neplastiki yekuputira kuti iwe usazowana akaomeswa makwande mumusanganiswa wako iwe paunenge uchishanda.
Ini Ndinoratidzira Sei Royal Icing?
Kupenda mamambo icing kuri nyore. Iwe unogona kushandisa chero chikafu chekudya chaunoda asi iwe haudi zvakanyanya. Kutanga nedonhwe rimwe chete pamukombe uye kubva ipapo. Ita shuwa kana iwe uchiwedzera rako ruvara iwe wosanganisa ne spoon uye edza kusawedzera chero mweya mune yako icing.
Ndingaite Sei Kuti Ndigadzirise Royal Icing Iyo Yakawandisisa?
Kana yako icing yeumambo yakanyanya kukora, wobva waenderera nekuwedzera mvura mu 1/4 tsp yekuwedzera uye kuyedza yeglob kana ribhoni danho. Kuwedzera yakawandisa mvura kuchaita kuti itete chaizvo.
Ndingaite Sei Kuti Ndigadzirise Royal Icing Iiyo Yakanyanya Kumhanya?
Iwe unogona kuwedzera yakasvinwa hupfu hwehuga mune yako yakatetepa yeumambo icing kusvikira yave gobvu sezvaunoda iwe. Izvo zvakanyanya kuomarara kugadzirisa yakatetepa yeumambo icing kunyange zvakadaro zvirinani kuyedza kusawedzera mvura yakawandisa kuti urege kuva nedambudziko iro.
Tarisa vhidhiyo pazasi pekuti ungaita sei humambo icing mune matatu akasiyana magadzirirwo! Kana iwe uine mubvunzo kwandiri, siya iwo mune zvakataurwa.
Ndinofanira Kushandisa Matsva Ezai Varungu kana Meringue Mune Yangu Royal Icing?
Mhinduro pfupi ndeyekuti, shandisa chero chaunonzwa kugadzikana nacho. Hazvina njodzi kudya mbishi mazai machena muumambo icing nekuda kwemakemikari ari pakati pemazai neshuga. Mune ino kamukira isu tiri kunyatso kushandisa pasteurized mazai machena ayo anorapwa kupisa. Kana iwe uchida kushandisa meringue poda panzvimbo yemazai machena, izvo zvakanaka futi. Tsp mbiri dze meringue powder pamwe nemaTepuni maviri emvura akaenzana nezai rimwe chena. Rimwe zai jena rinorema rimwe chete.
Iyi ndiyo yako yekutanga Royal icing recipe uchishandisa mazai machena. Iyi yeumambo icing inomesa yakanaka uye yakatsetseka uye dombo rakaoma! Iyo chete yekubheka iwe yauchazoda kune gingerbread dzimba, pombi, mafashama uye glazing. Iyi kamukira inoita zvakakwana kufukidza makumi masere epakati makuki! Kana uchida zvishoma iwe unogona kucheka nzira yacho nepakati. Chengetedza rakasara icing rakafukidzwa mupurasitiki kuputira mukamuri tembiricha. Kurudzira usati waishandisa. Gadzirira Nguva:5 mins Nguva Yese:5 mins Makorori:905kcal
▢32 oz (907 g) hupfu hwehuga kusefa
▢5 oz (142 g) pasteurized zai vachena
▢1/2 tsp (1/2 tsp) kirimu yetartar
▢1 tsp (1 tsp) vanilla yakabudiswa chinja chero chinwiwa chaunoda
Sungai mazai enyu machena, akasefa hupfu hwehuga, uye kirimu yetartar mumudziyo wesimendi yako musanganisi ne whisk yakasungirirwa.
Sanganisa pazasi kuti uwane zvinoshandiswa zvinosanganiswa wobva warova kusvika pakakwirira kwemaminetsi 1-2. Wedzera muvanilla yako yakatorwa uye chikwapuro kusvikira chena. Hapana chikonzero chekusanganisa kwenguva yakareba kupfuura maminetsi mashanu.
Isa icing yeumambo mumudziyo kana mudziyo une muvharo. YAKO YAKANAKA yeumambo icing ikozvino yagadzirira kuteteputswa pasi kune kusagadzikana kwaunoda.
Kushumira:makumi mashanug|Makorori:905kcal(Vane. Vashanu%)|Carbohydrate:227g(76%)|Mapuroteni:3g(6%)|Sodium:74mg(3%)|Potassium:61mg(piri%)|Shuga:221g(246%)|Vhitamini A:310IU(6%)|Iron:0.7mg(4%)
fluffy chena keke recipe kubva pakutanga
florida orenji keke ine creamsicle icing
kugadzira keke nekeke kusanganisa
kugadzira keke pop bundu